ဆန်းဝင်း (ကျောက်ပန်းတောင်း): 10/1/08 - 11/1/08
ချစ်သော ဘလော့ (Blog)
ကျ နော် လေ ဘ လော့ တွေ ထဲ မှာ ဆန်း ၀င်း ဆို တဲ့ ကျ နော့် ဘ လော့ လေး ကို အ ချစ် ဆုံး အ ကြိုက် ဆုံး ပါ ။ ဘာ လို့ လည်း ဆို တော့ ဒီ ဘ လော့ လေး ဖြစ် မြောက် လာ ဖို့ နား မ လည် ပါး မ လည် အ လုပ် ပျက် အ ကိုင်ပျက် ရူး သွပ် ခဲ့ တာ လေ ။ သူ များ တွေ ရေး သ လို ရေး ခြင် တာ ။ မြန်မာ ပြည် သူ /သား တွေ နောင် လာ နောင် သား တွေ အတွက် GENERAL information ပေး ခြင် တဲ့ ဘ လော့ ဂါ အကို အစ်မ တွေ ရဲ့ မေတ္တာ စေတနာ ရောင် ပြန် ဟပ် ပြီး ရ လာ တဲ ဘလော့ လေး မို့ ပါ ။
ကျ နော့် ဘ လော့ လေး ကို - အ မြဲ မ ပြတ် အား ပေး သော - မည် သူ မှန်း မ သိ ခင် က တည်း က အကိုကြီး လို့ ခေါ် ဝေါ် နှုတ် ကျိုး ခဲ့ သော၊ မ အား လပ် တဲ့ ကြား က လာ ရောက် လည် ပတ် အား ပေး သော Dr.Nyan . တစ် ဖြေး ဖြေး နှင့် မည် သူ မည် ၀ါ မှန်း သိ လာ သော အစ်မ ဒေါ် ၀ါဝါ ခိုင်မင်း (လေး စား မှု ဖြင့် ခေါ် ပါ သည်)။ ဘ လော့ နှင့် ပတ် သက် လာ ရင် မေး ခြင် တာ မေး နိုင် သော MBS က ကို ပီ ကေ ၊ တောင် ပေါ် သား လေး ကို စိုး မင်း ထိုက် ၊ အမြဲ အ လည် လာ အား ပေး သော အစ်မ မသက်ဇင် ၊ ဘ လော့ အ စ က အ ခက် ခဲ များ ကူ ပြော ပေး သော မစ် (စ်) သွန်း သွန်း၊ နောက် ထပ် အ များ ကြီး ပဲ ဗျာ - အ ခြား ဘ လော့ ဂါ သူ ငယ် ချင်း များ အား လုံး လဲပါပါတယ် ဒီကနေ ကျေး ဇူး တင် ကြောင်း ပြော ပါ ရ စေ ။
ကိုယ် တိုင် ဘလော့လေး ဖြစ်မြောက် လာမှ တော်ရုံ တန်ရုံနဲ့ ပိုစ် တစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ မလွယ်ဘူး ဆိုတာ သိလိုက် ရတယ် ။ ပေးလိုက် ရတဲ အချိန်တွေ လေ ။ ကျနော်တော့ ဒီနေထိ ပိုစ် တစ်ခုကို နှစ်ရက် သုံးရက် မရေးဖူး သေးဘူး ။ ကိုယ်ပိုင် ကွန်ပျူတာ မရှိတာကို အကြောင်း ပြထားတာပါ ။ ဆိုင် တော့ မဆိုင်ပါဘူး နော်။ လာ ခြင် ရင် အနီးလေး ရယ်နော် ။ ဒါပေမယ့် ရင်ထဲမှာ ဘလော့ရှိတယ် ။ ဘလော့ကို ချစ်တယ် ။ ဘလော့ လော့က ကိုချစ်တယ် ။ အဲဒါ တစ်ကယ်ပါ ။
အခု ကျနော် --
အ လုပ် လုပ် ရင်းနဲ့ part time ကျောင်း တက် ခြင် လို့ ပြင် ဆင် စ ရာ လေး တွေ ပြင် ရ ဦး မယ် ။ ကျောင်း ကို apply လုပ် ဖို့ ရယ် ဘာတွေ ဘယ်လို ဆိုတာ ဂဃနဏ သိအောင် လုပ်ရ ဦးမယ် ။ အခု လာမယ့် april မှာ တက်ဖြစ်ခြင်တယ် ။ အလုပ် ကို လည်း ဖိလုပ် ပေးလိုက် ဦးမယ် သဌေး သဘောကျအောင် ။
အလုပ်များ ကြောင်း၊ အမှန် တကယ် မအား ကြောင်း ကြို တင် အသိပေး ခြင်းလည်း တစ်မျိုး ပေါ့ဗျာ. နောက်ပီး စိတ်ကူး တစ်ခုရှိ သေးတယ်။ ကွန်ပျူတာ ၀ယ်ပြီး မှ အားရပါ့းရ ၊ မအိပ်ပဲ ဘလော့ပစ် ဦးမယ် ။ ဂါဂါ တို့ ဘယ်ခြေ လှမ်းရင် ဘယ်ခြေ ၊ ညာခြေလှမ်းရင် ညာခြေ ၊ ဘလော့ရေစီး ရဲ့ သံစဉ်နဲ အတိုင်း ချီတက် မယ် ။
DatE Friday, October 31, 2008 LaveL ကျေးဇူးစကား0comments link this
လက်တွေ့ ဘ၀ က ဒီလိုပါ.
နောက် က မြင် နေ ရ တာ ကမ်း နား ပင် လယ် ပါ ။ အ ပြော ကျယ် တဲ့ ပင် လယ် ရဲ တစ် ပိုင်း တစ် စ ပေါ့ ။ ဘ ၀ ခ ရီး သွား နေ သူ ဟာ ပင် လယ် ပြင် ခ ရီး ထွက် တဲ့ သူ လို ပဲ ။ ပင် လယ် ပြင် ကို ဖြတ် ရင် လှိုင်း ကြမ်း တွေ ၊ မုန် တိုင်း တွေ မ လွဲ မ သွေ ရင် ဆိုင် ကြုံ တွေ့ ရ မှာပါ ။ မုန် တိုင်း ပြီး ရင် လေ ပြေ လေ ညင်း ကို လည်း ရှူ ရှိုက် ခွင့် ရ မယ် ။ သိ ထား ရ မှာ က သ တိ တစ် ချက် လွတ် ရင် ကမ္ဘာ ကျော် တိုက် တန်း နစ် လို ရေ ခဲ တောင် နဲ တိုက် မိ ပြီး ဒုက္ခ နဲ လှ လှ နဲ့ တွေ့ တတ် တယ် ။ မုန် တိုင်း ကို အံ တု ၊ ဇ န က ထုံး မူ ပြီး ဘ ၀ ခ ရီး ကို ကူး ခတ် မယ် ။
DatE Sunday, October 26, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
ရုပ်ရှင်မင်းသား လုပ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိဘူး ကိုယ့်ဘလော့ ကိုယ်မင်းသားပေါ့
DatE Sunday, October 26, 2008 LaveL personal0comments link this
ရွာသားဆိုတော့ အက်ရှင် သိပ်မရ ဘူးပေါ့ဗျာ
စတီးကလစ် တပ်ရာတွင် သုံးသည်.
ဒီ နေ့ Heli deck မှာ safety wire netting ဟယ် လီ ကော် ပ တာ ဆင်း တဲ့ အ ခါ ဘေး ကင်း အောင် ကာ ကွယ် တဲ့ ၀ါ ယာ ပိုက် ကွန် တွေ တပ် တဲ့ အ လုပ် ကို သွား ကြည့် ရင်း လက် လှည့် စက် က လေး ကို ဓါတ် ပုံ ရိုက် လာ တယ် ။ ပုံ ထဲ မှာ မြင် ရ တာ က Steel Bandage က လစ် ပါ၊ ၀ါ ယာ ပိုက် ကွန် ကို ပိုက် ဖ ရိန် နဲ ထိမ်း ရာ မှာ ၀ါ ယာ နဲ ပိုက် ကို က လစ် နဲ ဖမ် ချုပ် ပါ တယ် ။ အဲဒီကလစ် ကို တပ်ဆင်ရာမှာ အခုမြင်၇တဲ့ လက်လှည့် စက်ကလေး ကို အ သုံး ပြု ပါ တယ်။ သူ မှာ က လစ် စ တီး ပြား လမ်း ကြောင်း ၊ က လစ် စ တီး ပြား ကို ချော် မ ထွက် အောင် ထိမ်း တဲ့ အ ထိန်း ခ လုပ်၊ ၀က် အူ လမ်း ကြောင်း နဲ ဆွဲ ပြီး တင်း ကြပ် ဖို့ မူ လီ ၊ လက် ကိုင် နတ် ခေါင်း အ လှည့် နဲ စ တီး က လစ် ပြား ကို ဖြတ် တဲ ဓါး ပါ ပါ တယ် ။ မြန် မာ အ ကို ကြီး အ လုပ် လုပ် နေတဲ့ ပုံ ကို ကြည့် ရင် ပို ရှင်းပါတယ် ။ ဘာ ရယ် မ ဟုတ် ဘူး Sample mechanic ပ ညာ ရပ် ကလေး ပါ ။
DatE Thursday, October 23, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
အ လုပ် လုပ် နေ သော မြန် မာ အကိုကြီး
Part time deploma form Ngee Ann
ယမန်နေ့ 21.10.08 နေ့စွဲနဲ စင်္ကပူ Ngee Ann Polytechinc က
april 2009 Semester အတွက် အချိန်ပိုင်း ဒီပလိုမာ အတန်းများ လျှောက်လွာ ဖောင်ဖွင့် ပါတယ် ။
ဖောင်ပိတ်ရက် ဖေါ်ပြထားခြင်း မရှိသေးပါဘူး ။ ဘာသာရပ် ၉ ခု ရှိပါတယ် ။
1. Technology (Aerospace)
2. Technology (Buliding service)
3. Technology (Electronics)
4. Technology (Electrical)
5. Technology (Logistics)
6. Technology (Mechanical)
7. Technology (Mechatronics)
8. Technology (Marine and Offshore)
9. Water Technology
စင်္ကပူမှာ နှစ်ရှည် အလုပ်လုပ် နေတဲ မြန်မာ နိုင်ငံသား (work permit) သမားများ အနေ နဲ ကတော့
ဒီကျောင်းကို တက်သင့်ပါတယ် ။ တက္ကသိုလ် ၀င်တန်း အမှတ်ဖြင့် တိုက်ရိုက် ၀င်ခွင့် မရပါက ၀င်ခွင့် စာမေးပွဲအား ဖြေဆို တက်ရောက် နိုင်ပါတယ် ။
အသေးစိတ် သိလိုပါက အောက်ပါဆိုဒ် တွင် ကြည့်နိုင်ပါသည် ။
DatE Wednesday, October 22, 2008 LaveL ထူးခြားသတင်း0comments link this
စိတ် နဲ သတိ
ငါ့ကိုယ်ငါ ဒေါကန်နေတယ် ။
အပျင်းထူလွန်းလို့ ၊ နှေးကွေးလွန်းလို့ ။
တစ်နေ့တာ လုပ်စရာရှိတာ မပြီးလို့ ။
တွေတဲ့သူကို ဘုဘောက်ပြောခြင်နေတယ် ။
အတွေးတွေကလည်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘူး ။
ငါ့စိတ်က ထိမ်းရင်းနဲ လွတ်လွတ်သွားတယ် ။
ပေါ့ပေါ့လေးတွေး ပြီး ပေါ့ပေါ့လေး နေခြင်နေတယ် ။
ခေါင်းထဲကို အမှိုက်တွေ ထည့်ခြင်နေတယ် ။
ငါသတိ ထားမှဖြစ်မယ် ။
DatE Tuesday, October 21, 2008 LaveL personal0comments link this
မွေး ရပ် မြေ အ တွက်
ဒီ နေ့ သူ ငယ် ချင်း စိုးငြိမ်း အောင် နဲ စ ကား ပြော ပြီး ဟို အ ရင် တည်း က လုပ် ခြင် နေ တဲ့ ကျ နော့် မွေး ရပ် ရွာ နာ မည် နဲ ဘ လော့ လေး ကို လုပ် ဖြစ် ပါ တယ်။ သူ ငယ် ချင်း က လည်း လို လို ခြင် ခြင် တိုက် တွန်း တော့ လုပ် ဖြစ် သွား တယ်။
ဘာ မှ တော့ မ ပြင် ဆင် ရ သေး ဘူး ။ google က ပေး တဲ့ အ တိုင်း လုပ် ထား တယ်.။ ဆန္ဒ တော့ အ ထ မြောက် သွား တယ် ။ ဖြေး ဖြေး ခြင်း ပြု ပြင် ယူ မယ် ။ ပြော သာ ပြော သာ ရွာ မှာ ဘ လော့ ကို သိပ် မ သိ ကြ ဘူး ။ ဖြေး ဖြေး ခြင်း နား လည် လာ ကြ မယ် ထင် ပါ တယ် ။ သ ဘာ ၀ စစ်စစ် ပိုစ် လေး တွေ နဲ စည် ပင် နေ တဲ့ စိတ် ကူး ထဲ က ဘလော့လေး ကို မြင် ရောင် ပြီး ပီ တိ ဖြစ် မိ ပါ ရဲ့ ။
ငယ် ငယ် က ဘူရားပွဲ၊ အလှူပွဲ များတွင် ဒိုးပတ်နှင့် သိဆို ခဲ့သော ကျနော်ရွာ ဖွဲ့ သီချင်းလေး အကုန်တော့ မရတော့ဘူး ။ တစ်ဝက်ပဲ ရတယ်။
လာလည်ပါ လေးရွာတစ်တန်း စခန်းသာ..
ပျော်ရွှင်စွာ ဖိတ်ခေါ်နေလျှက် သွေမပျက်ပါ..
သာယာတဲ့ လူဘောင်စခန်းကို လှမ်းစို တူမကွာ..
လက်ပန်ကျင်းခေါ် လေးရွာတစ်တန်းကိုလာရောက်လို့ လေ့လလည် စမ်းပါ…
DatE Sunday, October 19, 2008 LaveL မွေးရပ်မြေ0comments link this
ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့က တင်ထားတဲ ပိုစ်လေး အင်္ဂလိပ်မူရင်း ၀တ္တုတိုလေးကို ကိုပီကေရဲ့ ဘာသာပြန်လေးနဲ တွဲတင်လိုက်တယ်။
"EEEE, your mom only has one eye!"I wanted to bury myself.
I also wanted my mom to just disappear.I confronted her that day and said,
" If you're only want to make mealaughing stock,why don't you just die?"
My mom did not respond...I didn't even stop to think forasecond about what I had said,
because I was full of anger.I was oblivious to her feelings. I wanted out of that house, and
have nothing to do with her.So I studied real hard, gotachance to go abroad to study.
Then, I got married. I boughtahouse of my own.I had kids of my own.
I was happy with my life, my kids and the comforts,
I screamed at her,"How dare you come to my house and scare my children
!GET OUT OF HERE! NOW!!!"
And to this, my mother quietly answered, "Oh, I'm so sorry.
I may have gotten the wrong address," and she disappeared out of sight.
My neighbors said that she died.I did not shedasingle tear.
"My dearest son,I think of you all the time. I'm sorry that I came to your house and
scared your children.I was so glad when I heard you were coming for the reunion.
Asamother, I couldn't stand watching youhaving to grow up with one eye.
I was so proud of my son who was seeingawhole new world for me,
ကျနော့် အမေမှာ မျက်လုံးတစ်လုံးတည်း ပါတာဗျ။ ကျန်တဲ့ တစ်ဖက်က ချိုင့်ပြီး မျက်လုံး ဟောက်ပတ်ကြီး ဖြစ်နေတယ်။ အီး .... ဘယ်လောက် ရှက်စရာ ကောင်းသလဲဗျာ။ ကြောက်လည်း ကြောက်စရာကြီး။ ကျနော် သူ့ကို မုန်းတယ်။ သူက ကျနော်နေတဲ့ မူလတန်းကျောင်းမှာ အလုပ်လုပ်တယ်ဗျ။ ကျောင်းက ကျောင်းသားတွေနဲ့ ဆရာတွေအတွက် ထမင်းဟင်း ချက်ပေးရတယ်။မူလတန်း ကျောင်းသား ဘ၀တုန်းကပေါ့။ တစ်နေ့ အမေ ကျနော့် အခန်းလာပြီး ကျနော့်ကို လာနှုတ်ဆက်တယ်။ ကျနော် ရှက်လိုက်တာဗျာ။ သူ ဘာလို့ ဒီလို လုပ်ရတာလဲ ဆိုတာ ကျနော် စဉ်းစားမရဘူး။ ကျနော် စူးစူးရဲရဲကြီး ကြည့်ပြီး မျက်စောင်း ထိုးပစ်လိုက်တယ်။ နောက် မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကျနော် သူမရှိတဲ့နေရာမှာ သွားပုန်းနေလိုက်တယ်။ နောက်နေ့ အတန်းထဲမှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောတယ်။“အီး ..... မင်းအမေရဲ့ မျက်လုံးက တစ်ဘက်တည်း”ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သာ သေလိုက်ချင်တော့တယ်ဗျာ။ နောက်ပြီး အမေ့ကို ကျနော့် မြင်ကွင်းထဲက ပျောက်ကို သွားစေချင်တယ်။ အဲဒီနေ့က သူ့ကို ကျနော် တွေ့ပြီးတော့ သူ့ကို ပြောခဲ့တယ်။“ကျနော့်ကို အမြဲ ပျော်ရွှင် ရယ်မောနေတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် အနေနဲ့ မြင်ချင်ရင် ခင်ဗျားကြီး တစ်နေရာမှာ သွားသေလိုက်ပါလားဗျာ”
အမေ ကျနော့်ကို ဘယ်လိုမှ မတုန့်ပြန်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော့်မှာ ဒေါသဖြစ်လွန်းလို့ ကျနော် ပြောခဲ့တာတွေကို စက္ကန့်မလပ် ပြန်ပြန်ပြီး စဉ်းစားနေမိတယ်။ အဲဒီလို ပြောလိုက်လို့ သူ ဘာဖြစ်သွားသလဲ ကျနော် သတိမထားနိုင်တော့ဘူး။မြင်တိုင်း ရှက်မိနေတော့ အိမ်မှာ နေစရာ အကြောင်းကလည်း မရှိတော့ဘူး။ နေလည်း မနေချင်ဘူး။ သူငယ်ချင်း အိမ်မှာပဲ ကျောင်းစာ အသည်းအသန် လုပ်ဖြစ်တော့ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာသွားသင်ဖို့ အခွင့်အရေး ရလာခဲ့တယ်။နောက်တော့ ကျနော် အိမ်ထောင် ကျခဲ့တယ်။ ကိုယ်ပိုင် အိမ်လေးတစ်လုံး ၀ယ်နိုင်လာပြီး သားသမီး ရတနာတွေနဲ့လည်း စည်ကားလို့ပေါ့။ အခု လက်ရှိအနေအထားမှာ သားသမီးတွေနဲ့ ကျနော့်ဘ၀လေးကို ပျော်နေခဲ့တယ်။တစ်နေ့ အမေ ကျနော့်ဆီ လာလည်တယ်။ ကျနော်နဲ့ မတွေ့တာလည်း နှစ်တွေ အတော်ကြာပြီ။ သူ့ မြေးတွေကိုဆို မြင်တောင် မမြင်ဖူးဘူးလေ။ သူ အိမ်တံခါးရှေ့ လာရပ်တော့ ကျနော့် ကလေးတွေက လှောင်ပြောင်နေကြတယ်။ သရဲမကြီး၊ သရဲမကြီးပေါ့။ မဖိတ်ဘဲ လာတဲ့ သူ့ကို ကျနော် ငေါက်လွှတ်လိုက်တယ်။“ခင်ဗျားကြီး ကျုပ်အိမ်ကို လာပြီး ကျုပ်ကလေးတွေကို လာခြောက်နေတာလား။ သွား ... အခုချက်ချင်း ထွက်သွား။”အဲဒီလို ပြောသံလည်း ကြားလိုက်ရော အမေက ဖြေးဖြေးလေး ပြန်ပြောပြီး လှည့်ထွက်သွားပါတယ်။“အော် တောင်းပန်ပါတယ်ကွယ်။ အမေ လိပ်စာ မှားဝင်လာမိလို့ပါ။”တစ်နေ့ အိမ်ကို စာတစ်စောင် ရောက်လာတယ်။ ကျနော် ငယ်ငယ်က နေခဲ့တဲ့ ကျောင်းရဲ့ ကျောင်းသားဟောင်း စုံညီပွဲအတွက် ဖိတ်စာပါ။ အဲဒီမှာ အမေ ရှိနေမှာတော့ သေချာတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော့် ဇနီးကို အလုပ်ကိစ္စအတွက် ခရီးထွက်ဖို့လို့ ညာလိုက်ရတယ်။စုံညီပွဲပြီးတော့ ကျနော်ငယ်ငယ်က နေခဲ့တဲ့ အိမ်အိုလေးဆီ သွားခဲ့တယ်။ အံ့သြလွန်းလို့ပါ။ ကျနော် ရောက်တော့ အိမ်နီးနားချင်းတွေက အမေ ဆုံးသွားပြီ ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပါတယ်။ အော် ... ကျနော် မျက်ရည် တစ်စက်တောင် မကျပါလား။ကျနော် ဖတ်ဖို့ အမေ စာတစ်စောင် ထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစာကို ဖတ် အပြီးမှာတော့ .....ချစ်သားအမေ သားကို အချိန်တိုင်း သတိရနေတာပါ။ ဟိုတစ်နေ့က သားရဲ့အိမ်ကို လာတော့ အမေ့မြေးလေးတွေကို ခြောက်လှန့်သလို ဖြစ်သွားတာ အမေ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သား စုံညီပွဲကို လာတက်မယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ အမေ အတိုင်းမသိ ၀မ်းသာသွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သားကို တွေ့ဖို့ အိပ်ယာကနေတောင် အမေ မထနိုင်တော့ပါဘူး။ သား ကြီးပြင်းလာတဲ့ ကာလတလျှောက်လုံး သားကို အရှက်ရအောင် အမြဲလိုလို လုပ်နေမိတဲ့အတွက် အမေ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ သား ဟိုး ငယ့်ငယ်အရွယ်တုန်းက ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရပြီး မျက်လုံးတစ်လုံး ကွယ်သွားခဲ့တယ်။ အဲဒါ သား ဘယ် မှတ်မိတော့မလဲ။ မျက်လုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ ကြီးပြင်းရမယ့် သားတစ်ယောက်ကို အမေတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘယ်လို ခွန်အား အစွမ်းသတ္တိနဲ့ ကြည့်နေရက်မှာလဲ သားရယ်။ ဒီတော့ အမေ့ မျက်လုံး သားကို ပေးခဲ့တယ်လေ။ အမေ သိပ် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အခုဆို အမေ့သားကြီး ကမ္ဘာလောကတစ်ခုလုံးကို၊ သားရဲ့ ဘ၀လေးကို ကောင်းကောင်းကြီး ရှုမြင်နေနိုင်ပြီ။ အဲဒီ မျက်လုံးကြီးနဲ့လေ။ အမေ့နေရာကနေပေါ့။
အလုံးစုံသော ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်မင်းရဲ့ အမေ
ဘာသာပြန် = ကိုပီကေ
DatE Friday, October 17, 2008 LaveL စိတ်အဟာရ 1 comments link this
အ ခု ကျ နော် တို့ ကုမ္မဏီ က ဆီ သဘောင်္ တစ်စီး ကို ပြင် နေပါတယ်။ ကျနော် တို့ ကုမ္မဏီ တစ် ခု တည်း တော့ မ ဟုတ်ဘူး။ တစ်ဆင့် ခံ ကုမ္မဏီ တွေ အ များ ကြီး ပါ။ ကျ တော် သိ သ လောက် တော့ piping ပိုက် ကုမ္မဏီ ။ mechanary မစ်ရှင် နရီ (စက်ပြင်) ကုမ္မဏီ ။ painting ဆေး သုတ် ကုမ္မဏီ ။ electronic အီ လက် ထ ရော နစ် ကုမ္မဏီ ။ electrical အီ လက် ထ ရီ ကယ်။ carpenter ကာ ပန် တာ (လက်သမား) ကုမ္မဏီ ။ heavy steel job စ တီး အ ကြီး စား ပြင် ကုမ္မဏီ ။ light steel စတီး အ ပေါ့ စား ပြင် ကုမ္မဏီ ။ staging ညဏ်းဆင် ကုမ္မဏီ ။ insulation အ ပူ ခံ တပ် ဆင် တဲ့ ကုမ္မဏီ ။ crane service ကုမ္မဏီ ။ အ များ ကြီး ပါပဲ။
သဘောင်္ က 254000 မီလီမီတာ ရှည်ပါတယ်။ ပြုပြင်ခြင်း ကတော့ project type ပါပဲ။ conversion လုပ်တယ် လို့လည်း ခေါ်တယ်။ schedule ကျတော့ ၆ လ လို့ ပြော တယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နှစ် လည်း ဖြစ်ခြင် ဖြစ်သွား တာပဲ။ ဒီလို project သဘောင်္ တွေ ၃ စင်။ တစ်လ နှစ်လ သဘောင်္ တွေက ၅ စင်း လောက် တစ်ပြိုင် တည်း ပြင် ကြ တယ်။
ကျနော် ကုမ္မဏီ က repairing ကုမ္မဏီ ဖြစ်တော့ light steel စတီး အပေါ့ စားပြင် ပါတယ်။ light steel ဆိုပေ မယ့် foundation တစ် ခုကို ၃ တန် လောက် ရှိတယ်။ အဲဒါ light steel job တဲ့။ တစ်ခါ တစ်ခါ လည်း အလုပ် တစ်ခုကို ဘာမ မယ်မယ် ရရ မဟုတ်ဘူး။ မူလီလေး လဲ လိုက်တာ လောက်ပဲ။ .. အလုပ် လုပ်ရ တာတော့ ပျော်စရာ ပါပဲ။ အခြား သဘောင်္နဲ မတူလို့ပါ။ ဒီသဘောမှာ မြန်မာ တွေများတယ်။ ကုမ္မဏီ တိုင်း မြန်မာ တွေရှိတယ်။ မြန်မာပြည်လား အောင်းမေ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်ဘူး။
ဒီရက် ပိုင်းတွေ အလုပ်ထဲ စိတ် မရောက်လို့. မ နည်း အလုပ်ကို ဖိလုပ် နေရတယ်။ သဘောင်္ ကျင်း မှာ ရှိ တုန်း တော့ အခွင့်ပေး သလောက် ၊ ကျနော် သိသလောက် ရေး ဖို့ စဉ်းစား ထားပါတယ်။ fabrication နဲပတ်သက်ပြီး fitting ဖစ်တာ လုပ်ငန်း။ welder လုပ်ငန်း။ marker မာကာ လုပ်ငန်။ QC အရည်သွေး စစ်ခြင်း။ crane signaler ကရိန်း သမား။ work place safety အလုပ် ခွင် အန္ဆရယ် ကင်းရှင်းမှု ။ အဲဒီလို ပိုစ်လေး တွေ ဖြစ်လာ အောင် တင်ခြင် ပါသေး တယ်။
DatE Friday, October 17, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
ကျောင်း သား ဖြစ် ခြင် သည်
တကယ်က တက္ကသိုလ် ကောင်းကောင်းတစ်ခု မတက်ဖြစ်ခဲ့တာ မဟာအမှားကြီးပါပဲ။
ဒါ ဘယ်သူ့ကြောင့်လည်း။ ငယ်ငယ်ကတော့ သူများကို လက်ညှိုးထိုးခဲ့တယ်။
ခေတ်ကိုပုံချခဲ့တယ်။ ဒါတွေကလည်းတကယ် ရင်ဘတ်ကြီးနဲ့ ခံစားခဲ့ရတာပါ။
ရွာကထွက်လာကာစက ဘာမှမသိ ၁၆ နှစ် ၁၇ နှစ် အဖြူထည်လေးပါ။
လောကကြီးရဲ မတရားမှု တွေက အသက်ဆက်ရှင်ဖို့တောင် စိတ်ကုန်စေခဲ့တယ်။
ဘာပဲပြောပြော ဘယ်သူမပြု မိမိမှု ပါပဲ။
ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း မထူထောင်နိုင်တာ၊ အထီးကျန် တစ်ယေက်တည်းနေတတ်တာ။
ဒါတွေ မလိုပါဘူးကွာ၊ အလကားပါကွာ ဆိုတဲ့ အတွေးတစ်ခု နဲတင် တော်တော်ကို
မှားနေပြီ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း တွေ ပြောင်းလည်းစီးဆင်းနေတယ်
ဆိုတာကို ကိုမေ့ထားခဲ့တယ်. စာတွေဘယ်လောက်ဖတ်ဖတ် လောကတက္ကသိုလ်မှာ
ကျနော် စာမတော်ပါဘူး။ကျနော် မြတ်ချေဖြတ်ခဲ့တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က
အခု ကျနော်ကို ကြည်စားနေပြီ။ငယ်ငယ်ကဘ၀ကို သတိရတယ်..
ကျနော် ဆန်းဝင်း အသက် ၂၆ နှစ် မှာ ကျောင်းစာကို အထူးခြားဆုံး စာကျက်ခဲ့တာ
ဆိုလို့ ဆယ်တန်းတုန်းကပဲရှိတယ်။ အဝေးသင်ကဘွဲ့ ဆိုတာ မေးခြင်တာမေး ရေးခြင်တာ
ရေးဖြေလာတာပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက စွဲခဲ့တဲ့ အကျင့်လေး မပြောက်သေးဘူးအခုထိ။
အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာထ ဒုက္ခပေးတယ်။ ဘာလည်းဆိုတော့ ငယ်ငယ်က..
စာကျက်ရင်..မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ သိပ်ပံတွဲ၊ ၀ိပ်ဇာတွဲ စာအုပ်တွေ ထပ်ပြီး
အစီစဉ်တိုင်း ကျက်တယ်.စာမေးပွဲဖြေရင်တောင် နံပါတ် (၁)ကနေ စပြီး အစီ စဉ်တိုင်းဖြေတယ် ။
ဒါတော့ အမှတ်များလို့ အရင်ဖြေမယ် ဆိုတာ မရှိဘူး ၊ မရတာလည်း မရှိခဲ့ဘူး၊
အလုပ်ထဲမျာလည်း တစ်ခါတစ်ခါ ဒီအကျင့်က လာလာပြီးဒုက္ခ ပေးနေတယ်။
ကိုယ်ပိုင် အလုပ်မဟုတ်တော့ ကိုယ်လုပ်ခြင်သလို မရဘူး။
ငယ်ငယ်က ကျောင်းစာမှာတော်တယ် ။
ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာမှု မှာ ညံ့တယ် ။
ပတ်ဝန်းကျင် လေ့လာမှု ၊
mind game လို့ခေါ်တဲ့ ပညာရပ်မှာ ညံ့တယ်။
ဘာတော်လည်း မေးရင် အဖြေမရမယ့် မေးခွန်းတွေ ပတ်စဉ်းစားတဲ့နေရာမှာ တော်တယ်။
ကိုယ့်ခေါင်းကို ရှုတ်အောင် လုပ်တဲ့နေရာမှာ တော်တယ်။
အခု ကျနော် ကျောင်းသားပြန်ဖြစ်ခြင်နေတယ်။ ဖြစ်ခွင့်ကလည်း ငါးဆယ်ရာခိုင်နှုန်းမက ရှိတယ်။ ကျောင်းတက်ခြင်တယ်။
DatE Thursday, October 16, 2008 LaveL personal0comments link this
DatE Tuesday, October 14, 2008 LaveL PhoTooooooO0comments link this
လက် ရှိ စိတ် ကူး
ကျ နော် … အ လုပ် ကို စိတ်ပါ လက် ပါ မ လုပ် ပဲ ပစ် ထား တာ ကြာ ပြီ ။ ကွန် ပျူ တာ မှာ အင် တာ နက် ရ ပြီး နောက် ပိုင်း ပေါ့ ။ အင် တာ နက် ကောင်း လည်း ကောင်း တယ်၊ မ ကောင်း လည်း မ ကောင်း ဘူး။ ကောင်း တာ က သိ ချင် တာ သိ ရ တယ် ဒီ ဘ လော့ လေး ဖြစ် လာ တယ် ။ အ လုပ် က - အင် တာ နက် မ သုံး ရ email မှ အပ ဆို ပြီး တား မြစ် ထား တဲ့ ကြား က လုပ် နေ တာ ဒီ ဘ လော့ ပေါ့ ။ မ ကောင်း တာ က ကျ နော် စိတ် - နှစ် ပိုင်း မ ခွဲ တတ် ဘူး - စိတ် က အ လုပ် ထဲ ကို မ ရှိ ဘူး ။
ပုံ လည်း မ စွဲ ချင် တော့ ဘူး ၊ လက် လည်း ငြိမ် ဘူး ။ စိတ် မ ငြိမ် တာ လည်း ပါ တယ်။ အာ ရုံ ကို နှစ် လို့ မ ရ ဖြစ် နေ တယ် ။ အ ရင် က အ လုပ် တစ် ခု ကို လုပ် ရင် print ထုတ် ပြီး စစ် စ ရာ ကို မ လို ဘူး - ခု တော့ နှစ် ခါ သုံး ခါ လောက် ထုတ် စစ် နေ ရ တယ် ။ စာ ရွက် အ ကြမ်း တွေ လည်း သူ များ မ သိ အောင် ၀ဲ ပစ် ရ တယ် ။ ချွန် တွန်း တွေ က ရှိ သေး တယ် ။ စိတ် ၀င် တ စား အာ ရုံ မ စိုက် ရင် တစ် နေ့ နည်း နည်း ပဲ ပြီး တယ်။ လုပ် ဟ လုပ် ဟ ဆို ပြီး faster , faster ပြော မယ့် သူ လည်း မ ရှိ ဘူး ။ ကိုယ့် အ လုပ် ကိုယ့် ဘာ သာ ဆုံး ဖြတ် ပြီး ကိုယ့် လှေ ကိုယ် ထိုး ဆို သ လို ပဲ ။ တစ် ခါ တစ် ခါ လည်း အ ရမ်း ပျင်း တဲ့ ကျ နော် ကို အ လုပ် က တွန်း တယ်၊ ဒီ လို မျိုး ဆို ယား လို့ တောင် ကုတ် ကြား မ ရှိ ပါ ဘူး ။ တ ကယ် ပါ ကိုယ့် လုပ် ရပ် ကို မ ကြိုက် တာ။ အကြွေး ထား တာ ကြာ တော့ အ ခု အ လုပ် တွေ ပိ နေ ပြီ ။ အာရုံ ကို မရ - ရ အောင် နှစ် ပစ် လိုက် မယ်။
ဘ လော့ အ တွက် စ တင် ပြု လုပ် စဉ်က စိတ် ကူး ထဲ မှာ တော့ သ ဘောင်္ ကျင်း အ ကြောင်း နဲ့ လုပ် ငန်း အ ခြေ နေ ရေး မယ် စိတ် ကူး ပြီး တ ကယ် တန်း ရေး တော့ ခို လို ငြီး တဲ့ အသံ နဲ ပိုစ် တွေ ဖြစ် နေ တာ သ တိ ထား မိ တယ် ။ ခု တော့ အ လုပ် ထဲ အာ ရုံ စိုက် ဦး မယ်။ ဘ၀အ တွက် လည်း လုပ် စ ရာ တွေ အ များ ကြီး ရှိ သေး တယ်။
သ တိ ရ လို့ မ ဗေ ဒါ ရဲ့ ဝေ ဖန် ချက် က တော် တော် ကောင်း တယ် ဗျာ။ လက် ရှိ ဘ ၀ လေး မှာ ငြိမ် နေ တာ တော့ မ ဟုတ် ပါ ဘူး ။ ကျောင်း တက် ဖို့ လုပ် နေ တယ် ။ ပြင် ဆင် နေ တယ် ဆို ရင် ပို မှန် လိမ့် မယ် ။ ဘွဲ လက် မှတ် တစ် ခု ရဲ့ အ သုံး ၀င် မှု ကို သ ဘော ပေါက် တယ်။ စ င်္က ပူ က မ လေး တ ရုတ် တွေ ရဲ့ စီး ပွား ရှာ အ မြတ် ထုတ် မှု ကို လည်း သ ဘော ပေါက် တယ် ။ အင်.. ငါ မှာ လုပ် စ ရာ တွေ အများ ကြီး ပါ လား .. နောက် တစ် ခါ ပိုစ် တင် ရင် သ တိ ထား ပြီး စာ ကို စာ လို ရေး တော့ မယ် ။
DatE Friday, October 10, 2008 LaveL personal0comments link this
How handsome is this guy !!!! .. Right?
DatE Wednesday, October 08, 2008 LaveL s'pore and job0comments link this
စိတ်က .. ဘလော့ရေးဖို့ပဲ စိတ်ကူးရောက်နေတယ်.. တကယ်တန်း .. စာရေးခြင်နေပေမယ့် မရေးအားဖူးဖြစ်နေတယ်. နောက်ပြီး.. ဖတ်နေကျ ၊ အလည်မခေါ် ပဲသွားနေကျ တူနယ်ချင်း တွေဆီ ကိုသွားခြင်းပေမယ့် လည်း မရောက်ဖြစ်ဘူး.
ဒီနေ့ မနက်စောက ဘလော့ကို ဖွင့်ပြီး ဘယ်သူတွေများ မျက်စေ့ လည် လမ်းမှားရောက် လာမလဲလို့ သိခြင်စိတ်နဲ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်တယ်..
ဘာဖြစ်နေလည်း မသိဘူး ကျွန်ပျူတာက အရမ်းလေးနေတယ် window တစ်ခု file တစ်ခုကို အကြာကြီး ဖွင့်နေရတယ်.. ဒါနဲ ကွန်ပျူတာထဲက အသုံးမ၀င်တော့တဲ့ နှစ်ကြာတဲ့ ဖိုင်တွေ ဖျက်ပစ်တယ်
နောက်ပြီး ယာယီအင်တာနက်.(temporary internet file) ဖိုင်ထဲက ဖိုင်တွေ ပုံတွေ ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်..
အဲဒီမှာဗျာ.. ပုံတစ်ပုံ ကိုသွားတွေ့တယ်.. bitmap ပုံလေး ငယ်ငယ်လေးဆိုတော့ သိပ်မြင်ရဘူး ပုံကတော့ ကောင်မလေး ပုံလေးပဲ..
ဒါနဲ zoom လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်.. ဟာ..အောင်မလေး…ဗျ.. ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာ.. သရဲ..ဗျ..သရဲ.. screen အပြည့်တက်လာပြီး . မျက်လုံးပြူးပြနေသလို … တကယ်..ကြက်သီးထတယ် ..
လူကို ရင်တုန်သွားတာပဲ အပြာရောင်ဝတ်ထားတယ်. ပုံက သရဲမကို ခေါင်းပေါ်က ရိုက်ထားတာ. အပေါ်ကိုမော့်ကြည့်နေတဲ့ပုံ .. အနီးကပ် မျက်နှာကို မြင်ပြီး လန့်လိုက်တာ..ကြောက်လိုက်တာဗျာ…ကျွန်တော် သရဲကြောက်တယ်..
ဘေးမှာလည်း ဘယ်သူမှရောက်သေးဘူး.. ဒါနဲ .. မြန်မြန်ပိတ်ပြီး delete လုပ်ပစ် တယ်. ဘလောကိုဖွင့် ကြည့်မှာ တောင် မဖွင့်ရဲတော့ဘူး ဘယ်ကဘယ် လိုရောက်နေတာပါလိမ့်ဗျာ… ကျွန်တော်လည်း သရဲ ဆိုဒ်တွေ မကြည့်ပါဘူးတခါတည်းနဲ့ လန်သွားပြီ နောက်ဆို ဘေးနားမှာ လူမရှိရင် ကွန်ပျူတာကို မဖွင့်ရဲတော့ဘူး…
DatE Saturday, October 04, 2008 LaveL စပ်မိစပ်ရာ0comments link this
Diploma in Marine & Offshore Technology (MOT)
Remember the carefree childhood days of building toy ships with Lego bricks? Have you ever dreamt of building ships, streamlined likeashark’s body to reduce water resistance?
Now, you can realise your dreams and pursueacareer in the maritime industry, with our Diploma in Marine & Offshore Technology (MOT)!
With the MOT diploma, you will possess the only and the highest level of qualification in naval architecture and offshore technology in Singapore.
Unique to MOT is the availability of many scholarships. They include the MOT-ASMI Scholarship at S$10,000 annually over three years. You can also vie for other scholarships like KC Lee, ASMI and those from shipyards like Keppel Offshore & Marine.
With our MOT diploma, you will landajob quickly and enjoy an attractive pay package. You can find employment in the marketing, purchasing, designing, constructing and testing of marine vessels, oil rigs and semi submersibles. MOT graduates need not sail on board ships as seafarers.
To be eligible for consideration, candidates must have the following GCE ‘O’ Level examinations (or equivalent) results:
Subject 'O' Level Grade
Mathematics (Elementary/Additional) 1–6
Science (with Physics or Chemistry or Biology component) or Design & Technology 1–6
The aggregate computation for selection is based on grades obtained for English, Mathematics, Science or Design & Technology and two other subjects.
** Candidates with English asasecond language (EL2) must have attainedaminimum grade of 6.
Candidates with hearing deficiency should not apply for the course.
DatE Saturday, October 04, 2008 LaveL Education0comments link this